हाउ फन्नी : प्रियंका र केकी जासुस, एसपी दयाहाङ केश सुम्पिदै ! (फोटोफिचर) « रंग खबर
हाउ फन्नी : प्रियंका र केकी जासुस, एसपी दयाहाङ केश सुम्पिदै ! (फोटोफिचर)
रंग खबर, काठमाण्डौं । गत शनिवार थापाथलीस्थित एक अफिसमा रमाइलो दृश्य देखियो । जँहा नायिका प्रियंका कार्की र केकी अधिकारीलाई सिबिआई बनेका दयाहाङ राईले एउटा केश सुम्पिरहेका थिए । प्रियंका र केकी दुवै जासुस रहेछन् जसलाई सिबिआईले केश सुम्पिदै थिए ।